Xagee kala marayaan xisbiyada Sweden? | Somaliska
Iyadoo doorashada ay naga xigot 6 maalmood oo keliya ayaa waxaa soo baxday afti ururin cusub oo laga sameeyay shacabka Sweden. Aftidaan oo ay samaysay shirkada Novus ayaa lagu soo bandhigay in farqiga u dhexeeya labada xulufo ee iska soo horjeeda uu hoos u dhacay balse taageerada xisbiga cunsuriga ah ee SD ay siyaaday.
Afti ururinta oo ay samaysay shirkada Novus ayaa lagu soo bandhigay in farqiga u dhexeeya labada xulufo ee kala ah Rödgröna iyo Alliansen ay marayso 8,6% iyadoo bishii hore ahayd 11,2%. Xulufada mucaaradka ee Rödgröna ayaa guud ahaan heshay 47.1% Halka xulufada dowlada ay heleen 38,5%.
Xisbiga cunsuriga ah ee Sveridemokraterna (SD) ayaa helay 10,4% taasoo ah taageeradii ugu badnayd ee ay abid helaan. Haddii natiijada doorashada Sweden ay sidaan ku dhamaato ayaa xisbiga SD noqonayaa kuwa awooda leh maadaama labada xulufo midnoodka uusan helin aqlabiyad ku filan. Xisbiyada kale ayaa ku qasban markaas in ay la shaqeeyaan SD haddii ay doonayaan in ay hirgaliyaan siyaasadooda.
Sbx Jimcaali warkaan xageed ka soo xigatay mise adiga ayeey kulatahay oo niyadaa.da waxa ku jera ayaat noo ´shegeya miya
War halkaan la baxay Abdiqadir xishoo. Waa ceeb in quf ku soo dadaalay war aadan ogaan laheyn ku sheegay in aad dhahdo noo sheeg meshaad ka soo xigatay, adoo uula jeedo in beeneeso warka. Hadaad la socotid saxaafa sweden mise aad wax aqrisid su’aasha xun lama so boiden. Weebabka swedishka aqrisa meesha ayaad ka heleesa. Caadina iska dhig yaah.
Vivaa Moderaterna !!!!!
sheekadan been miyaa heee maba ogiyee aniga mesha wax marayan wana codeyey!!!